မိဘပိုက်ဆံ နဲ့ အချိန်ကုန်ခံ ဂိမ်းဆော့ Fb သုံးပြီး အချိန်ဖြုန်းနေကြတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဒီလိုသားလေးမျိုး များများရှိစေချင် – GuGuGarGar
မိဘပိုက်ဆံ နဲ့ အချိန်ကုန်ခံ ဂိမ်းဆော့ Fb သုံးပြီး အချိန်ဖြုန်းနေကြတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဒီလိုသားလေးမျိုး များများရှိစေချင်
Shwe | July 28, 2020 | Knowledge | No Comments
ဒီနေ့ နေ့လည် တုန်းက ဆိုင် ကယ်နဲ့ မိန်းနား သွား ရင်း ဘီးပေါ က်ပါလေရော။ အဲ့ဒီတော့ တွန်းပေါ့လေ ။ပထမဆုံးေ တွ့တဲ့ဆိုင်က အဖိုးကြီး တစ်ယောက် သူကကြည့်ပြီး ကျွတ်လဲရမှာတဲ့။ ကလစ်ဆိုင် ကယ်မို့ သူမဖြုတ်ေ ပးနိုင်ဘူးတဲ့။ ခက်တယ်တဲ့။ ဟုတ်တယ်။ Click ဆိုင်ကယ်ေ တွက နောက်ဘီးဖြုတ်ရတာ ခက်တယ်။ ရှေ့နားမှာ ဘီးဖာတဲ့ ဆိုင်ရှိတယ် တစ်ပြပဲဆိုတာနဲ့ ဆက်တွန်း သွားလိုက်တာ ၆၉ လမ်းနဲ့ ၃၉ လမ်းဆုံမှာ ဒီဆိုင်လေးတွေ့ပါေ လရောဗျာ။ ဘီးဖာပေးတဲ့ဆရာက အသက် ၁၀ နှစ်ဆိုတော့ ဟဖြစ်ပါ့ မလားပေါ့။ နာမည်က မင်းခန့်ကျော်တဲ့။ ကျောင်းက ၄ တန်းဖြေ ထားတယ် ဆိုပဲ……
Click ဆိုင်ကယ် ကို မပြီး ဘီးကိုတ စ်ယောက်ထဲ အလွယ်တကူ ဖြုတ်လို့ ကျွတ်အသစ် လဲပေးတာများ အတော်ကျွမ်း ကျင်တာဗျ။ သူ့အဖေရဲ့ဆိုင်မှာ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ ကူလုပ်ေ ပးနေတာတဲ့။ အသက် ၈ နှစ်ကထဲက လာကူတာ အခုတော့ တော်တော်လေး ကို ကျွမ်းကျင်နေပြီ။ သူ့ဝမ်းသူကျောင်းနိုင်တဲ့ အသက်မွေး ပညာတတ်သွား ပြီ။ ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက မိဘတိုင်း သားသမီး ကို ခိုင်းပါ။ ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူရော ဆင်းရဲတဲ့သူပါ သားသမီးကို အလုပ်လုပ်ခိုင်းကြပါ။
အလုပ်လုပ်ြ ခင်းက လူကို ရင့်ကျ က်စေပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်ပြီးရှာရတဲ့ ငွေရဲ့ တန်ဘိုးကိုသိသွားတဲ့အ တွက် ဘ ယ်တော့မှ လမ်းမှားမရောက်တော့ဘူး။ မပျင်းတော့ဘူး ။အခုခေတ်မိ ဘတွေ သားသမီး ကိုမခိုင်းကြဘူး။ အိမ်ကအကြွေးတ င်နေပေမယ့် သားသမီးကြ ဖိနပ် သိန်းကျော်တန် ဆိုင်ကယ်အေ ကာင်းစား ကားအကောင်းစား နဲ့ ထားကြတယ်။အဲ့ဒီတော့ သားသမီးက မိဘကို ကိုယ်ခြင်းလဲမစာ။ လောကနိ ယာမတရားလဲမသိ။ အလုပ်လဲမလု ပ်ချင်။ မိမိဘဝအခြေ အနေမှန်ကိုလဲ မသိ နဲ့ ဟေး လားဝါးလား အသက်ကြီးပြီး မတိုးတက်ပဲ လူညွှန့်တုန်းရပါတယ်။ အခုခေတ်ကလေးေ တွပိုဆိုးပါတယ်
Game နဲ့ Facebook ကို ဘဝ ထင်ပြီး တစ်ချိန်လုံး နှိ ပ်နေတယ်။ ကိုယ်ရှာတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်နှိပ်ရင် မပြောလိုပါဘူး။ မိဘပိုက်ဆံနဲ့နှိပ်တာတော့ လွန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ မိဘများ သားသမီး ကို ချစ်တယ်ဆို များများ ခိုင်းကြပါ။ ဒါမှ သူတို့ဘဝတွေတိုးတက်မှာပါ။ ငွေပုံကြီးပေးထားလဲ အချိန်တန် ကုန်သွားမှာပါ။ ငွေရှာနည်းသင်ပေးလိုက်ရင် တစ်သက်မကုန်တော့ ပါဘူး။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အလုပ်ကြိုး စားနေတဲ့ လူတော်လေး မောင်မင်းခန့်ကျော်ကို အားပေးချင် ရင်တော့ ၆၉ လမ်းနဲ့ ၃၉ လမ်းဒေါင့်မှာရှိတဲ့ သူ့ဆိုင်မှာ တာယာလဲတာ လေချိန်တာ ဘီးဖာ တာတွေ လုပ်ပေးနေ ပါတယ်လို့….
Credit PyiSoeOo Mandalay
ဒီနေ့ နလေ့ညျ တုနျးက ဆိုငျ ကယျနဲ့ မိနျးနား သှား ရငျး ဘီးပေါ ကျပါလရေော။ အဲ့ဒီတော့ တှနျးပေါ့လေ ။ပထမဆုံးေ တှ့တဲ့ဆိုငျက အဖိုးကွီး တဈယောကျ သူကကွညျ့ပွီး ကြှတျလဲရမှာတဲ့။ ကလဈဆိုငျ ကယျမို့ သူမဖွုတျေ ပးနိုငျဘူးတဲ့။ ခကျတယျတဲ့။ ဟုတျတယျ။ Click ဆိုငျကယျေ တှက နောကျဘီးဖွုတျရတာ ခကျတယျ။ ရှနေ့ားမှာ ဘီးဖာတဲ့ ဆိုငျရှိတယျ တဈပွပဲဆိုတာနဲ့ ဆကျတှနျး သှားလိုကျတာ ၆၉ လမျးနဲ့ ၃၉ လမျးဆုံမှာ ဒီဆိုငျလေးတှပေ့ါေ လရောဗြာ။ ဘီးဖာပေးတဲ့ဆရာက အသကျ ၁၀ နှဈဆိုတော့ ဟဖွဈပါ့ မလားပေါ့။ နာမညျက မငျးခနျ့ကြျောတဲ့။ ကြောငျးက ၄ တနျးဖွေ ထားတယျ ဆိုပဲ……
မိဘပိုကျဆံ နဲ့ အခြိနျကုနျခံ ဂိမျးဆော့ Fb သုံးပွီး အခြိနျဖွုနျးနကွေတဲ့ ခတျေကွီးမှာ ဒီလိုသားလေးမြိုး မြားမြားရှိစခေငျြ
Click ဆိုငျကယျ ကို မပွီး ဘီးကိုတ ဈယောကျထဲ အလှယျတကူ ဖွုတျလို့ ကြှတျအသဈ လဲပေးတာမြား အတျောကြှမျး ကငျြတာဗြ။ သူ့အဖရေဲ့ဆိုငျမှာ ကြောငျးပိတျရကျတှေ ကူလုပျေ ပးနတောတဲ့။ အသကျ ၈ နှဈကထဲက လာကူတာ အခုတော့ တျောတျောလေး ကို ကြှမျးကငျြနပွေီ။ သူ့ဝမျးသူကြောငျးနိုငျတဲ့ အသကျမှေး ပညာတတျသှား ပွီ။ ဒီနရောမှာပွောခငျြတာက မိဘတိုငျး သားသမီး ကို ခိုငျးပါ။ ငှကွေေးခမျြးသာတဲ့သူရော ဆငျးရဲတဲ့သူပါ သားသမီးကို အလုပျလုပျခိုငျးကွပါ။
အလုပျလုပျွ ခငျးက လူကို ရငျ့ကြ ကျစပေါတယျ။ ကိုယျတိုငျ အလုပျလုပျပွီးရှာရတဲ့ ငှရေဲ့ တနျဘိုးကိုသိသှားတဲ့အ တှကျ ဘ ယျတော့မှ လမျးမှားမရောကျတော့ဘူး။ မပငျြးတော့ဘူး ။အခုခတျေမိ ဘတှေ သားသမီး ကိုမခိုငျးကွဘူး။ အိမျကအကွှေးတ ငျနပေမေယျ့ သားသမီးကွ ဖိနပျ သိနျးကြျောတနျ ဆိုငျကယျအေ ကာငျးစား ကားအကောငျးစား နဲ့ ထားကွတယျ။အဲ့ဒီတော့ သားသမီးက မိဘကို ကိုယျခွငျးလဲမစာ။ လောကနိ ယာမတရားလဲမသိ။ အလုပျလဲမလု ပျခငျြ။ မိမိဘဝအခွေ အနမှေနျကိုလဲ မသိ နဲ့ ဟေး လားဝါးလား အသကျကွီးပွီး မတိုးတကျပဲ လူညှနျ့တုနျးရပါတယျ။ အခုခတျေကလေးေ တှပိုဆိုးပါတယျ
Game နဲ့ Facebook ကို ဘဝ ထငျပွီး တဈခြိနျလုံး နှိ ပျနတေယျ။ ကိုယျရှာတဲ့ ပိုကျဆံနဲ့ ကိုယျနှိပျရငျ မပွောလိုပါဘူး။ မိဘပိုကျဆံနဲ့နှိပျတာတော့ လှနျပါတယျ။အဲ့ဒီတော့ မိဘမြား သားသမီး ကို ခဈြတယျဆို မြားမြား ခိုငျးကွပါ။ ဒါမှ သူတို့ဘဝတှတေိုးတကျမှာပါ။ ငှပေုံကွီးပေးထားလဲ အခြိနျတနျ ကုနျသှားမှာပါ။ ငှရှောနညျးသငျပေးလိုကျရငျ တဈသကျမကုနျတော့ ပါဘူး။ ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ အလုပျကွိုး စားနတေဲ့ လူတျောလေး မောငျမငျးခနျ့ကြျောကို အားပေးခငျြ ရငျတော့ ၆၉ လမျးနဲ့ ၃၉ လမျးဒေါငျ့မှာရှိတဲ့ သူ့ဆိုငျမှာ တာယာလဲတာ လခြေိနျတာ ဘီးဖာ တာတှေ လုပျပေးနေ ပါတယျလို့….
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ အမေစု ပန်တဲ့ ပန်း ဟာ ဘယ်သူ ပန်ပေး တယ် လို့ ထင်ကြလဲ? ပြောသွား တာလေး သဘောကျတယ်။
အမြန်လမ်း တစ်လျှောက် သတိထားကြဖို့ ယာဉ် မတော်တဆ အဖြစ်ဆုံးနေရာများ
လိုအပ်တာထက် ပိုစား ၊ ပိုအိပ်ရင် ဓာတ်လိုက်စေမယ့် လက်ပတ်ကို တီထွင်